Hamsa - the umgexo wenhlanhla ngokumelene izifo eziningi
Ngazo zonke izikhathi, lapho abantu ezisengozini inhlekelele, izifo ezibulalayo, izimpi noma izinhlekelele, bazama bazivikele kanye nabathandekayo ngosizo kwemvelo, emandleni aphakeme. Gobe, imithandazo, iziphandla, imibhalo eqoshiwe, izimpawu kanye nezinye izindlela eziningi ezingaqondakali ukuya Yiqiniso kusukela ekuqaleni iminyaka kuze kube namuhla. "Anchovy" kwezinkulumo ezinamandla kakhulu iziphandla lwasendulo kubhekwe isihloko ngaphansi kwegama eziyinqaba.
Ngisho ngenkathi Neolithic, t. E. 8000 BC, abantu ababehlala endaweni isimo nesi, eBabele, owayehlala ngasogwini lomfula iNayile, ezazilengiswe emizini yabo into encane, ezimise ifanana ibhulashi esandleni womuntu kwesokudla, noma kunalokho ku entendeni. Lona anchovy - njengentelezi ukuthi zivikela okubi iso, amashwa kanye nosizi, amathonya amabi futhi ngokuvamile zonke emandleni amabi.
Okumangazayo ukuthi, abantu ehluke ngokuphelele bamkholwa, ngisho kuvezwa ngendlela efanayo: kuhle parallel on kokubili imiphetho (2 esikhundleni esisodwa njengoba zezandla zethu), kulandela efanayo alinganayo-2 kanye isikhathi eside phakathi kwabo - index. Ngokuvamile entendeni (hamsa umgexo wenhlanhla, kodwa hhayi womuntu) ukuthi lihlotshiswe izimpawu ezihlukahlukene ezingaqondakali, kodwa kamuva kule.
Kungakhathaliseki ukuthi ezahlukene phakathi isiko nempucuko sezizwe nangenkathi ezahlukene kanye nezindawo ezinkolweni zabo, amasiko, ifilosofi ngisho namaphutha ubandlululo inokuthile efana. Ngokwesibonelo, izintelezi efanayo. Kakhulu njengentelezi lasendulo Hamsa watholakala abavubukuli lapho bemba zasemizaneni yaseMesophothamiya. izimo ezinjalo ezatholakala ocwaningweni impucuko yasendulo endala - waseFenike, Indian, yamaGreki namaRoma nabanye. mlando Ngokuyinhloko, ethnographers, isiko izazi zikholwa ukuthi njengentelezi hamsa emuva izinganekwane of abaseFenike lasendulo, ikakhulukazi, nonkulunkulukazi wabo u-Tanit (noma ithangi). Ubethula abakhulekelwa izakhamuzi iMedithera, eNyakatho ye-Afrika nakwezinye izindawo.
Tanit kwakubhekwa njengesibusiso unkulunkulukazi iqhawe, umama eyintombi yabantu bakhe. Yingakho ithemba Ukuvikelwa yayo onguMninimandla onke, futhi anchovy (njengentelezi). Okusho kwaba ngokunembile ekumeleleni esihlasela ngezinqola zempi, izandla saso esivela kuNkulunkulu onamandla, kuzo zonke izinhlobo ngamashwa. Kunobufakazi bokuthi abalandeli lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa ungenise ngisho ezinganeni umhlatshelo ukuze nxusa ukuvikelwa unkulunkulu. Ethandwa kakhulu kwakuwukuthi waseCarthage. Kamuva yokukhulekelwa kukankulunkulukazi u-Tanit ahlanganisiwe ihlelo Juno (futhi Aphrodite) e izinganekwane yamaGreki namaRoma. Ngokuthakazelisayo le njengentelezi efanayo ukhona phakathi kwezizwe zamaSemite, futhi abakhileyo East, abalandeli Islam - Arabhu. Le ndlela bayibiza ngokuthi kuye hhayi kuphela ngokuthi "Kwesandla SikaNkulunkulu."
Izimpande amazwi incazelo yaleli gama
Ngokungavamile, hhayi kuphela umsuka talisman, kodwa leli gama, ubizwa ngokuthi. Hamsa - the umgexo wenhlanhla, izithombe okuyinto ethulwa lapha - simile elihlobene ne izilimi eziningi. Modern Arabhu, Maltese nesiHebheru abe ezivamile isisekelo - ulimi zamaSemite. Kuhunyushwe kusuka egameni lakhe njengentelezi kusho "emihlanu". Lena inhlangano ngqo "Kwesandla SikaNkulunkulu" efanayo, okuyinto lona wawulotshwe ngenhla uthi. Futhi nge iminwe emihlanu womuntu!
yesiqalo ephathelene nokudabuka Ubude uchaza ngokwezinga elithile ukuba khona njengentelezi njengoba ukuthi ama-Arabhu, nezitha zabo lokhokho bamaJuda. By the way, lezi amaSulumane 5 iminwe elihlobene ne 5 izimpawu yokholo lwabo. Nokho, sithole ukuthi kukhona njengentelezi ngaphezulu ubuqaba ezijulile, ezimfundisweni monotheistic nezinkolo. Le nkinga yaqala uphawu yasendulo Indian nezimfundiso esithombeni zikaBuddha. Ezinkolweni zaseMpumalanga limelela ngokuphelele ngesivikelo saphezulu.
Kusukela Venus ukuze Fatima noMariya
Uma abaseFenike lasendulo anchovy elihlobene ne tannins, abaseGibhithe asihlobanisa abanye onkulunkulu bakhe obuphakeme - Isis kanye u-Osiris, zohlobo unkulunkulu Thor. Tank abazinikezele imihlatshelo yezingane, njengoba eGibhithe lasendulo izithupha anchovy esiqokiwe imimoya abazali, ubani okufanele ukuvikela izingane. Ngakho-ke iziphandla ngokuvamile hung phezu izingane indlwana noma ezigugile kubo. Futhi abesifazane abakhulelwe nezigqizo zaziyinsakavukela kakhulu eziwusizo, nokugcina ezinhle impilo okhulelwe umama, ukuhlinzeka ukukhanya nokubeletha, abaningi webele ubisi, futhi unempilo inzalo.
Ngaphezu empeleni "anchovy", ie. E., "iminwe Five", okukhulunywe njengentelezi ngaphezulu "isandla kaMariya (Miriam) no Fatima." Nalapha futhi, lesi sibalo esingokomfanekiso 5 lihlotshaniswa Jewish Ezinhlanu Zokuqala Torah ongcwele. UMiriyamu - udadewabo kakhulu lo umprofethi uMose, ezaholela amaJuda ukuba iZwe Lesithembiso. Fatima efanayo - indodakazi ka Muhammad, umprofethi omkhulu Islamic. Ngokusho yetinsita umfanekiso wakhe kufanekisela ukubekezela, ukholo, futhi entendeni - 5 izinsika ukholo Muslim. Ezweni Christian yesimanje futhi mascot ethandwa kakhulu. Kukholakala ukuthi kuletha inhlanhla.
Uma ucabangela izinhlobo ezahlukene iziphandla, singabona ukuthi anchovy kungaba ngeminwe yabo futhi ibuthakathaka. Khonokho entendeni emelelwa iso (abona yonke into ayakubona iso laphezulu), inkanyezi enamaphoyinti ayisithupha (kaDavide), nezinhlanzi ezimbili, ngisho Izitho zangasese zesifazane. Lokhu kungenxa amagugu ukuthi befakwa isithombe. Ekuvikeleni neso elibi neziqalekiso njengentelezi egqokwa entanyeni nge angababulali noma esikhundleni salo. Ngokuvamile ku talisman ekhethekile ebhaliwe imithandazo angamaJuda noma isibusiso Indian. Anchovy kanye kudedelwa njengelungu elengayo a isongo, chain key for imoto noma ezinye okhiye. Umbala umgexo wenhlanhla - blue - kwenjabulo, injabulo ngokuletha. Futhi ukuhlobisa it ne amagugu nangebala.
Wazi kanjani ukuthi igama umyeni wakhe (esikhathini esizayo). Wazi kanjani ukuthi igama lomyeni wakhe wesikhathi esizayo ngesandla, ukubhula ngokufunda intende
Ukuqagela ephepheni ngepeni ku umfana: ukubuyekeza, izici kanye nokubuyekeza
Ukuqagela Christmas izingane. ukubhula Yule wekuhlela sokukhulelwa. ukubhula Christmas
Dubrovnik (Croatia) ukuthi bayakufanelekela ngokuvakashela kuleli dolobha
Abaphikisi amadayimane, zirconia cubic noma Yini?